သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုများအတွက် SSD ကို DRIVE ကိုရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို - SSD ကို - 2019
လောလောဆယ် SSDs တဖြည်းဖြည်းသမားရိုးကျ hard drives တွေကိုအစားထိုးနေကြပါတယ်။ မကြာသေးမီကသည်အထိ SSD ကို၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏဖြစ်နှင့်များသောအားဖြင့်စနစ်တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက, သင်ယခု 1 terabytes သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့ drive ကိုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤအ drives တွေကိုများ၏အားသာချက်များကိုသိသာများမှာ - ကတိတ်ဆိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်မှု SSC စေရန်မည်သို့အချို့သောအကြံပေးချက်များပေးပါ။
သစ်တစ်ခု disk ကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်သင့် system များအတွက်ညာဘက် device ကိုရှေးခယျြကူညီရန်ရွေးချယ်စရာများစွာအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်:
သင်၏ system အတွက်ရရှိနိုင်ပါချိတ်ဆက်ဖို့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းလေ့လာရန်;
disc ကို၏ "stuffing" ကိုအာရုံစိုက်။
ဤအ parameters တွေကိုငါတို့သည် drive ကိုရှေးခယျြ, ဒါရဲ့အသေးစိတ်တွင်ဤအသီးအသီးကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။
solid state drives တွေကိုသင်သည်အခြားတစ်နှစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်ဆည်းပူးဖို့အများကြီးပိုရှည်သမားရိုးကျ drives တွေကိုထက်ဤသို့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ volume ၏ရှေးခယျြမှုပိုမိုတာဝန်သိချဉ်းကပ်ရန်ထို့ကြောင့်လိုအပ်ပေသည်။
သငျသညျ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်စနစ်နှင့်အစီအစဉ်အတွက် 128 GB ကို၏စုံလငျသိုလှောငျစွမ်းရည် SSD ကိုသုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားပါ။ သငျသညျလုံးဝသမားရိုးကျ disk ကိုအစားထိုးချင်လျှင်, ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာ device ကို 512 GB ကိုတစ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဒါ့အပြင်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, disk ကိုပမာဏကိုန်ဆောင်မှုဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဖတ် / Write Speed ​​ကိုအပေါ်။ အဆိုပါအချက်ကို controller ကိုအတွက်သိုလှောင်မှုပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက်မှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်အပေါ်ဝန်ပျံ့နှံ့ဖို့ပိုအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်သောအခါအသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အဖြစ်မည်သည့်အခြားကိရိယာ, ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ခံရဖို့အသုံးပြုမှုအတွက် SSD ကိုအတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးကွန်နက်ရှင် interface ကို SATA နဲ့ PCIe ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အတူ disks PCIe interface တွင် SATA နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ကဒ်၏ form မှာလုပ်နေကြသည်။ SATA drives တွေကိုပိုမိုသာယာသောအသွင်အပြင်ရှိသည်, သူတို့တစ်တွေကွန်ပျူတာနှင့်မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စွယ်စုံဖြစ်ကြသည်။
သင်တစ်ဦး disc ကိုဝယ်ခင်သို့သော်က Motherboard က connectors PCIe သို့မဟုတ် SATA ပေါ်မှာဖြည်ရှိ, မရှိစစျဆေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။
M.2 - ထို SATA ဘတ်စ်ကားကိုသုံးနိုင်သည်ပေးသောအခြားကွန်နက်ရှင် interface ကို SSD ကို-drives တွေကို, နှင့် PCI-Express ကို (PCIe) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ connector ကိုအတူ disc ကို၏အဓိကအင်္ဂါရပ် - ကကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ သူတို့က "ထစ်" ၏အရေအတွက်ကွာခြားသော့ချက် B နဲ့အမ် - စုစုပေါင်းနှစ်ခု connector ကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအမှု (key ကိုခ) တစ်ဖြတ်ထွက်, ဒုတိယအတွင်းရှိပါတယ် - သူတို့အနှစျယောကျတညျး။
ကွန်နက်ရှင် interfaces မြန်နှုန်းအတွက်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ, အမြန်ဆုံးဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းသည် 3.2 Gb / s ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျသော PCIe ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် SATA - 600 MB / s အထိ။
သမားရိုးကျ HDD မတူဘဲ, အ Solid-State သိုလှောင်မှုဒေတာအတွက်အထူးမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့။ MLC နှင့် TLC - ဤမှတ်ဉာဏ်၏ disk တွေနှစ်မျိုးနှင့်အတူ Now ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ဒါဟာကိရိယာ၏မှတ်ဉာဏ်သယံဇာတနှင့်မြန်နှုန်းအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အမြင့်ဆုံးနှုန်းဟာ MLC အမျိုးအစားမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ drive ကို၌ရှိကြ၏, ဒါကြောင့်သင်မကြာခဏကြီးမားတဲ့ဖိုင်များ, copy delete သို့မဟုတ်ရွှေ့ဖို့ရှိပါကကသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သို့သော်ဤ discs တွေကို၏ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: flash မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစား Nande နှိုင်းယှဉ်ရန်
အများဆုံးအိမ်သုံးကွန်ပျူတာများအတွက်ထွက်ရှိသော discs တွေကို TLC မှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားကိုမှသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမြန်နှုန်းသူတို့ MLC ယုတ်ညံ့ပေမယ့်သမားရိုးကျသိုလှောင်ရေးကိရိယာမှနေဆဲသိသိသာသာသာလွန်ဖြစ်ကြသည်။
controller စဘို့ chip ချမှတ်သူများ
disc ကို၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အနည်းဆုံးအခန်းကဏ္ဍ chipmakers ကစားဘူး။ တစ်ခုချင်းစီက၎င်း၏အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် SandForce controller ကိုချစ်ပ်အပေါ်အခြေခံပြီး ပို. ပို. လူကြိုက်များကြသည်။ သူတို့တစ်တွေအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ဤအချစ်ပ်များ၏ပိုင်ထိုက်သောမှတ်တမ်းတင်ဘို့ဒေတာချုံ့သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သိသိသာသာအားနည်းချက်ရှိပါတယ် - disc ကိုပိုဖတ် / Write အမြန်နှုန်း၏ထက်ဝက်ထက်သိသိသာသာကျဆင်းပြည့်စုံလေ၏။
အံ့ဩခြင်းကနေချစ်ပ်နှင့်အတူဘီးတို့သည်အဆာရာခိုင်နှုန်းအကျိုးသက်ရောက်စေမအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမြန်နှုန်း, ရှိသည်။ ဒီမှာသာအားနည်းချက်မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Samsung ကလည်း SSDs ဘို့ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့အား - ဟာ့ဒ်ဝဲအဆငျ့မှာဒီစာဝှက်စနစ်။ သို့သော်သူတို့တစ်တွေအားနည်းချက်ရှိသည်။ သောကြောင့် "အမှိုက်သရိုက်" ပရိသ၏ algorithm နှင့်အတူပြဿနာများ, / Write Speed ​​ကိုဖတ်ပါလျှော့ချနိုင်ပါသည်။
မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ Fizon ချစ်ပ်။ အဲဒီမှာအမြန်နှုန်းကိုထိခိုက်မအချက်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကကျပန်းအရေးအသားနှင့်စာဖတ်ခြင်းမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမပြကြဘူး။
LSI-SandForce - Solid-State သိုလှောင်မှုနဲ့ controller ဘို့ချစ်ပ်များ၏အခြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အတော်လေးမကြာခဏဒီထုတ်လုပ်သူကနေကုန်ပစ္စည်းများ။ အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များကိုတ Nande Flash ကိုမှထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းအချက်အလက်များ၏ချုံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အလှည့်ထဲမှာ drive ကိုတိုက်ရိုက်အရင်းအမြစ်များကိုကယ်တင်ရာမှတ်တမ်းတင်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပမာဏလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်ကတော့ memory ကိုအများဆုံးဝန်မှာ controller ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကျဆင်းခြင်းသည်။
နောက်ဆုံးတော့ချစ်ပ်၏နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ - က Intel ရဲ့ပါပဲ။ ဤအချစ်ပ်အပေါ်အခြေခံပြီး controllers အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖေါ်သည်ကြီး, ဒါပေမဲ့သူတို့ပိုပြီးစျေးကြီးအခြားသူများထက်ဖြစ်ကြသည်။
အဓိကထုတ်လုပ်သူများအပြင်အခြားသူများရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘဏ္ဍာရေးနှစ် disk ကိုမော်ဒယ်များတွင်ဤချစ်ပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေမယ့်, သူတို့ရဲ့တာဝန်တွေနှင့်အတူကောင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, နှင့်အခြားသူများ၏ထက်နိမ့်ကြောင်း based နဲ့ controller jMicron ချစ်ပ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
rating disk တွေ
ယင်း၏အမျိုးအစားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအရာမျိုးစုံ disk တွေ, စဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့သိုလှောင်မှု၏အမျိုးအစားငွေပမာဏကိုယူသည်။
disks 128 Gb
ဤကဏ္ဍတွင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုမော်ဒယ်များခွဲခြားနိုင်ပါတယ် Samsung က MZ စ-7KE128BW စျေးနှုန်းထဲမှာ 8000 တထောင်အထိအထိ။ ရူဘယ်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာ Intel SSDSC2BM120A401ဘယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို 4000 ကနေ 5000 ရူဘယ်ဖို့နေကြပါတယ်။
မော်ဒယ် Samsung က MZ စ-7KE128BW ယင်း၏ကဏ္ဍမြင့်မားတဲ့ဖတ် / Write အမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကြောင့်ပါးလွှာခန္ဓာကိုယ်မှ Ultrabook အတွက်တပ်ဆင်မှုအတွက်စုံလင်သည်။ ဒါဟာမှတ်ဉာဏ်ချထားပေးခြင်းအားဖြင့်အလုပ်အရှိန်မြှင့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မြန်နှုန်းကိုဖတ်ရှု: 550 Mbit / s နဲ့
မြန်နှုန်းရေးရန်: / s ကို 470 MB အထိ
ကျပန်းဖတ်မြန်နှုန်း: 100,000 IOPS
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 90000 IOPS
IOPS - လုပ်ကွက်၏နံပါတ်သိုလှောငျထားသို့မဟုတ်ဘတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရမှတ်မြင့်မား, ကိရိယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား။
Intel က SSDSC2BM120A401 drive ကို 128GB အထိတစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူ "အများပြည်သူကဏ္ဍ" တို့တွင်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Ultrabook အတွက်တပ်ဆင်မှုအတွက်အမြင့်ဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်နှုန်းကိုဖတ်ရှု: 470 Mbit / s နဲ့
မြန်နှုန်းရေးရန်: / s ကို 165 MB အထိ
80000 IOPS ၏ကျပန်းဖတ်မြန်နှုန်း
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 80000 IOPS
240-256 မှ 128 ကနေအသံအတိုးအကျယ် GB ကိုအတူ discs
ဒီမှာ drive ကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည် SanDisk SDSSDXPS-240G-G25ဘယ်ဟာ 12 တထောင်အထိကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ရူဘယ်။ တစ်ဦးကစျေးသက်သာပေမယ့်မနည်းအရည်အသွေးကိုမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် OCZ VTR150-25SAT3-240G (7 ကြိမ်မြောက်။ ရူဘယ်) ။
Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ Crucial CT256MX100SSD1:
မြန်နှုန်းကိုဖတ်ရှု: 520 Mbit / s နဲ့
မှတ်တမ်းတင်မြန်နှုန်း: 550 Mbit / s နဲ့
90000 IOPS ၏ကျပန်းဖတ်မြန်နှုန်း
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 100,000 IOPS
Key ကို OCZ VTR150-25SAT3-240G Features:
မြန်နှုန်းရေးရန်: / s ကို 530 MB အထိ
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 95000 IOPS
480 GB ကိုတစ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ discs
ဤကဏ္ဍတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါသည် အရေးပါ CT512MX100SSD1 17,500 မိုင်တွင်ရူဘယ်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ။ စျေးသက်သက်သာသာရှိသော counterpart ADATA ပရီးမီးယားလိဂ် SP610 512GB, ၎င်း၏တန်ဖိုးကို 7000 ရူဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ Crucial CT512MX100SSD1:
မှတ်တမ်းတင်မြန်နှုန်း: 500 Mbit / s နဲ့
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 85000 IOPS
Key ကို ADATA ပရီးမီးယားလိဂ် SP610 512GB Features:
မြန်နှုန်းကိုဖတ်ရှု: 450 Mbit / s နဲ့
မြန်နှုန်းရေးရန်: / s ကို 560 MB အထိ
72000 IOPS ၏ကျပန်းဖတ်မြန်နှုန်း
ကျပန်းရေးမြန်နှုန်း: 73000 IOPS
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ SSD ကိုရွေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်စံမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ယခုတွင်သင်သည် SSD ကိုသင်နှင့်သင့် system ကိုအကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောအဆုံးဖြတ်, ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရရန်ရှိသည်များနှင့်, ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။